May 2014 – democracy for burma
#บ่ายที่ผ่านมา #clip #เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก #พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
On May 31, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
บ่ายที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ที่อยู่ในเครือข่ายสหกรณ์ เครือข่าวเกษตรกร จำนวน50คน นำผลไม้สด ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด และดอกกุหลาบ มามอบให้กับทหารนาวิกโยธิน กองพันทหารราบที่2ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยมี นอ.วันชัย กุลมนต์ หัวหน้ากองฝ่ายกิจการพลเรือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ออกมารับหนังสือ ของตัวแทนจากสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีและกลุ่มเครือข่ายองค์การเกษตรกรต่างๆ cr.Krisada Sawatdichai
#THAILAND #SOUTH #ISLAM #TERRORISTS #continued their #violent #attacks on #civilian #targets
Southern insurgents continued their violent attacks on civilian targets with the latest bombing ofagrocery shop in Yaha district of Yala province Saturday causingahuge fire that engulfed three wooden houses.
Yaha police said they were alerted of the bomb attack at 5.30 a.m Saturday by the owner ofagrocery shop Worawat Lohavijarn.
The grocery shop is located nearamasjid andamarket.
Fire engines rushed to the scene but could put the fire under control an hour later after three houses were burnt to the ground.
The grocery shop owner said he heardaloud explosion which followed by fire. He managed to bring his family out in time before the fire raged to engulf the whole building.
Police sad the insurgents plantedahome made bomb at the shop along withatank of gasoline. The bomb was set to explode by alarm clock.
Meanwhile police in Yala were also alerted Saturday morning of the insurgents felling downatree to block the Ban Tonyo-Ban Thungka road and placedaposter across the road.
The poster reads ” Patani Merdika.”
The police removed the poster and cleared the area of suspected bombs before allowing traffic to pass.
Witness told police two men in motorcycle were seen in the area with the poster before cutting the tree and tied the poster across the road.
#Bangladesh now #preparing for #fighting whenever #facing #Myanmar #Securities at #border
On May 31, 2014 By Burma Myanmar newsIn Burma1 Comment
If Myanmar and Bangladesh fightawar
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နှစ်နိုင်ငံ စစ်ဖြစ်လာခဲ့လျှင်
Bangladesh now preparing for fighting whenever facing Myanmar Securities at border line. They build front site stations and troops are ready with tanks and mechain and wepons…
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ရှေ့တန်းစစ်စခန်းတွေ၊ တင့်ကားတပ်တွေနဲ့ စစ်သားတွေကို လက်နက်တပ်ဆင်ထားပြီးအသင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်ဧရိယာမှာ အမိန့်ရတာနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့် စောင့်နေပြီ။
Myanmar Securities are also alert to be ready by 60 mm, 120 mm Arsenals.
မြန်မာပြည်ဖက်ကလည်း ၆၀ မမ၊ ၁၂၀ မမ အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောကြားမှာ အဆင်သင့် တပ်လှန့်ထားကြပြီ။
It will be Navy and Flying is not guessable so far. But one thing is quite sure that Myanmar Navy is more powerful in South East Asia Area. And flying may be 50 ~ 50.
လေတပ်၊ ရေတပ် တွေ ၀င်ပါလာကြမယ့်ပုံကတော့ ခန့်မှန်းမရနိုင်သေးဘူး ဆိုပေမယ့် မြန်မာ့ရေတပ်မတော်ကတော့ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အင်အားအကြီးဆုံးအထဲက တစ်ခုဖြစ်နေတာတော့ သေချာတယ်။ လေတပ်အနေနဲ့ကတော့ သူမသာ ကိုယ်အသုဘ အခြေအနေနဲ့ တူပါတယ်။
But we must note one primary thing that is loyalty. Bengali immigrants are hightly sprit throughout of Myanmar. They are not us. They may be playing see saw policy. If Myanmar Military will be winner satutation they would be with Myanmar if not Bangladesh.
တကယ်သတိထားရမှာက တစ်နိုင်ငံလုံး ပျံ့နေတဲ့ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ အန္တရာယ်ပဲ။ သူတို့တွေက ဟိုဖက် ဒီဖက် သာတဲ့နေရာက နေနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတာမို့ပဲ။ နိုင်နိုင်ခြေရှိတဲ့သူဆီမှာ ခိုလှုံခွင့်ယူနိုင်ကြတယ် ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို တက်စီးကြလိမ့်မယ်။
Firstly, Those immigrants from Buthitdown abd MaungDaw townships must fight Myanmar securities and Ethnic Rakhine People in order to contribute Muslim Area of Islamization by jihad because of the same nation, language and religion.
ပထမဆုံးကတော့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွေက အကောင်တွေ လုံခြုံရေး နဲ့ ဒေသခံ ရခိုင်တွေကို အနီးကပ် ပြောင်ကျားစနစ်တွေနဲ့ လုပ်ကြံသွားနိုင်တယ်။ အစ္စလာမ်မိုင်ဇေးရှင်း ဆက်ကြောင်းအရသော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးအနွယ်တူ၊ ဘာသာစကားတူ၊ ကိုးကွယ်မှုလည်းတူတဲ့ မွတ်စလင်တွေ အချင်းချင်း ပုလဲနံသင့်ပြီးသားမို့ ဂျီဟတ်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲလာနိုင်တယ်။
Secondly, They could do explosion and evolution for Islamizing conbining by in and out…
ဒုတိယကတော့ အတွင်းက ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ အပြင်က ဘင်္ဂလီတွေ ပူးပေါင်းပြီး အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကို အလ္လာကခိုင်းစေတာပါ ဆိုပြီး လုပ်လာကြလိမ့်မယ်။
So, What is the Rakhine State future. What is called peace. What is called developing at that time…
ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာ ဘာလဲ လို့ မေးလာကြရလိမ့်မယ်။
The dead line time is for you and me? Be careful your environment especially Muslim Communities’ actions for your family, for your friends, for your nation, for your country.
ဒီလို သေရေး ရှင်ရေး အချိန်ကာလမျိုးမှာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိသားစုအရေး၊ အပေါင်းအသင်းအရေး၊ အမျိုးသားအရေး၊ နိုင်ငံ့အရေးအတွက် ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်အသိုင်းအ၀ိုင်း အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ထားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
#MYANMAR #BURMA #Hmuu #Zaw ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်အငြင်းပွားမှု
On May 31, 2014 June 1, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
မောင်တောနယ်စပ်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏပြုလုပ်နေသော RSO သောင်းကျန်းသူ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာ BGB မှ ကြေးစားအဖြစ် လက်သတ်မွေးစားထားသူများဖြစ်
မြန်မာတပ်မတော်သားတွေက ပေးလိုက်တဲ့ ဆုကို ဆွတ်ခူးရန် အတွက်…
အလ္လာရှင်ထံက အမိန့်ကို စောင့်စားနေတဲ့ BGB-က ငနဲ.
၁။ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်တွင် မိမိနိုင်ငံ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များမှ အမှားအယွင်း တစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့ပါ။ မိမိနိုင်ငံပိုင်နက် နယ်မြေသို့ဝင်ရောက်လာသည့် RSO ဟု ယူဆရသော လက်နက်ကိုင်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ (ဤသည်ကိုလည်း သတင်းအပြည့်အစုံ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်)
၂။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ မိမိနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးမှ သက်သေအထောက်အထားများဖြင့် ဘင်္ဂလားအစိုးရအား ဖြစ်စဉ်အမှန် ရှင်းပြထားပါသည်။ နှစ်နိုင်ငံ အထင်လွဲမှားမှု မရှိစေရန် သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းလျက် ရှိပါသည်။
၃။ မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များအကြားတွင်လည်း ဖြစ်စဉ်အမှန်ကို ရှင်းလင်းထင်ရှားစွာ သိစေနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းလျက် ရှိပါသည်။ မိမိတပ်ဖွဲ့များ အမှား မရှိပါ။ လက်မောင်းတံဆိပ်မပါ ပြောက်ကြားဝတ်စုံအဝါဝတ် လက်နက်ကိုင်များ မိမိနယ်မြေသို့ ဝင်ရောက်လာ၍ ဖြစ်ပွားရခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး မထိခိုက်စေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့်အညီ သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် လက်ရှိ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ချမှတ်ထာသည့် မူဝါဒမှာ (၁) အချုပ်အခြာအာဏာ အထိခိုက်မခံ (၂) ပြည်သူများအကျိုးစီးပွား အထိခိုက်မခံ (၃) နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ အထိခိုက်မခံ ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ကျန်အပိုင်းများမှာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ ဖြစ်၍ ထုတ်ပြန်ရန် မရှိပါ။ သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်းထားပါသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများ မရှိကြစေလိုပါ။
ရခိုင်လူငယ်များအဖွဲ့ CR. ARAKAN NEWS YOUTH
CR. ASHIN KUMUDA
ယနေ့ နောက်ဆုံးရ မြန်မာ – ဘင်္ဂလားဒေးရ်ုနိုင်ငံ နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးအခြေနေ သတင်းများ (၃၀.၅.၂၀၁၄)
ဒီကနေ့ မိုင်တိုင် ၅၂ – ည ၄း၀၀ နာရီ ၅ မိနစ်အချိန်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ုနယ်စပ်စောင့်တပ်ဖွဲ့များနှင့် တိုက်ပွဲ တစ်နာရီလောက်စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ုနယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များက ကျနော်တို့တပ်ဖွဲတစ်ယောက်ကျဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်။
တကယ်ကျတော့ အဲဒီ BGB တပ်ဟု ဟန်ဆောင်ပြီး နယ်စပ်ထဲသို့ မကြားခဏ ၀င်ရောက်၍ ရှောင်ပုံတိုက်ခိုက်လျှက်ရှိသည့်ကို မြန်မာတပ်
များကသိပါတဲ့ အဲဒီ RSO ကုလားဆိုးများဟာ BGB တပ် ဟု ဟန်ဆောင်၍ မြန်မာနယ်စပ်ခြံစည်းရိုးထဲသို့ရောက်၍ မြန်မာတပ်များကို ခိုအောင်း
တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ Continue reading “#MYANMAR #BURMA #Hmuu #Zaw ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်အငြင်းပွားမှု” →
ANOTHER #MYANMAR #BURMA #RSO #BANGLADESHI BORDER #CLASH
29.5.2014 The government has reported more clashes between Myanmar border guard police and insurgents they say come from the Rohingya Solidarity Organization (RSO).
The clashes occurred when RSO rebels reportedly tried to enter Myanmar territory on the morning of May 28 at post 52 on the Myanmar-Bangladeshi border.
An army section led by Lieutenant Zaw Moe Aung in charge of border security was on patrol when two insurgents crossed the border and approached within 80 feet of the barbed-wire border fence.
A man wearing yellow camouflage was killed and his M22 rifle, four magazines, 98 bullets were confiscated while the others fled back into Bangladesh.
Myanmar has long accused Bangladesh for providing sanctuary to militant organisations intent on carrying out attacks on Myanmar soil.
Border-level authorities heldameeting on May 21 to discuss security, and the supervisor of Myanmar border guard police stated that Bangladesh is responsible for these incidents.
The insurgents, they say, are based in Bangladesh and the government has repeatedly requested cooperation to eliminate them.
Commander Colonel Khondkar Forid Hassan, from Bangladesh’s Border Guard, denied the insurgents were living in Bangladesh, despite warnings that any further incursions could lead to Myanmar to take further diplomatic action.
On the morning of May 13, the government reported that RSO insurgents entered the country near the border post 38 and clashed with the Myanmar border guard police.
Later on May 17, RSO insurgents ambushedaMyanmar border guard police on the territory between the border post 52 and Natyaykan. Four policemen were killed and one injured.
#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #49/2557 #เรื่อง #ความผิด #สำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง
On May 30, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
( 22.15 น. )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 49/2557 เรื่อง ความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง โดยการให้ใช้สถานที่ หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ชุมนุมในทางการเมือง เช่น เครื่องขยายเสียง เต้นท์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ ผู้สนับสนุนต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย ….>> รายละเอียดต่างๆ เพื่อนๆ อ่านเองนะครับ !! cr. cathay mee
# กรณีข่าวลือกลุ่มคนแต่งกายคล้ายทหารบุกยึดทรัพย์สินชาวบ้าน ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุดรธานี
… ตามที่มีการปล่อยข่าวลือในระบบสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ว่า “มีทหารเข้าตรวจค้นบ้านเรือนและยึดทรัพย์สินประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิศัย จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุดรธานี” นั้น
… คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ดังนี้
… “จากการตรวจสอบกับหน่วยราชการในพื้นที่ ทราบว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด คาดว่า การปล่อยข่าวลือดังกล่าวเป็นเจตนาของผู้ไม่หวังดีที่พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของทหาร และสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ให้เกิดขึ้น ซึ่งการปล่อยข่าวลือลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยที่มีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์”
“ในการเข้าตรวจค้นหรือจับกุมนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องมีหมายศาลหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นใดแจ้งให้ผู้เป็นเจ้าของสถานที่นั้นทราบ ก่อนเข้าดำเนินการ และในการปฏิบัติจะเป็นการตรวจค้นร่วมกัน ทั้งตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเจ้าของสถานที่ร่วมสังเกตการณ์ในระหว่างทำการตรวจค้นด้วย ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันที”
… พร้อมกันนี้ อยากขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน “อย่าได้หลงเชื่อข่าวลือใดๆ ที่ปล่อยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่แน่ชัด และขอให้ตรวจสอบข่าวสารกับหน่วยงานของรัฐ ก่อนตัดสินใจเชื่อข่าวดังกล่าว”
#ช่วยแชร์ #แกนนำ #แดง’ #เอี่ยวคดีฆ่า’ #สุทิน #ธราทิน’ โผล่กำกับม็อบหิวประชาธิปไตย
‘แกนนำแดง’เอี่ยวคดีฆ่า’สุทิน ธราทิน’ โผล่กำกับม็อบหิวประชาธิปไตย
30 พ.ค.57 ในโลกออนไลน์ นำภาพเหตุการณ์การชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งปรากฎภาพ นายสมบัติ ทองย้อย แกนนำ นปช. อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
โดยภาพที่ปรากฎในโซเซียลเน็ตเวิร์กนั้น แสดงให้เห็นว่า นายสมบัติ มีอาการโมโห เกรี้ยวกราด ท่ามกลางผู้ชุมนุมและสื่อมวลชน จำนวนมาก จำนวน3ภาพ พร้อมคำบรรยาย ระบุว่า การชุมนุมในวันที่ 27 พ.ค.57ที่ผ่านมา ไม่เป็นไปตามแผน นายสมบัติ จึงต้องลงมานำม็อบด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ การชุมนุมเมื่อวันที่ 28 พ.ย.57 ที่ผ่านมา ผู้ชุมนุม ได้นำสีสเปรย์พ่นใส่รถทหารที่ยังจอดไว้อยู่ เป็นข้อความแสดงจุดยืนว่า ไม่ต้องการรัฐประหาร รวมทั้งเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนบาดเจ็บจากการถูกขว้างขวดน้ำใส่บริเวณใบหน้า หมดสติทันที 1 นาย และเป็นลม 1 นาย
ขณะที่ในเฟสบุ๊ค ‘สมบัติ ทองย้อย’ https://www.facebook.com/bat.thongyoi ยังปรากฎข้อความเมื่อวันที่ 28 พ.ค.57 ว่า ‘อยู่บ้านทำไมไปแว๊นส์ดีกว่า เย็นๆเจอกัน’ รวมถึงภาพถ่ายบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด้วย
ทั้งนี้ นายสมบัติ ทองย้อย ถูกกล่าวหาว่า ยิง นายสุทิน ธราทิน แกนนำคนสำคัญของ กปท. และอดีตผอ.พรรคการเมืองใหม่ บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยม เมื่อ 26 ม.ค.57
ซึ่งต่อมา นายสมบัติ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สน.บางนา โดยแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยอ้างว่า วันเกิดเหตุได้ขับรถยนต์มาเพื่อไปทำธุระ จนมาถึงจุดเกิดเหตุได้ลงไปดูสถานการณ์และเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อลายทหารมีทีท่าจะทำร้ายประชาชน จึงเข้าไปห้ามและแยกออกมา ขณะนั้นสื่อมวลชนจึงได้บันทึกภาพของตน และกล่าวหาไปว่าเป็นคนร้ายที่ยิง นายสุทิน
แนวหน้า cr. กปปส. ลุมพินี